UVatiswa uselindele abakwaFerguson ngezinyathelo zomthetho
UMLINGISI wakuleli osemnkantshubomvu uVatiswa Ndara uthi uzobhekana nezinyathelo zomthetho ezivela kwiFerguson Films uma esethole amaphepha.
Uthe usakubone ezinkundleni zokuxhumana kuphela ukuthi le nkampani ihlongoza ukumthathela izinyathelo zomthetho ngokuyisola ngokumxhaphaza.
UVatiswa ngoMsombuluko ususe ukukhuluma kuTwitter uNgqongqoshe wezaMasiko amaCiko nezeMidlalo uMnuz Nathi Mthethwa incwadi enamakhasi angu-6 ekhalaza ngezimo abanganeme ngazo abasebenza ngaphansi kwazo. Kule ncwadi uphinde waveza ukuthi iFerguson Films ithe izomkhokhela uR110 000 ukuqopha isizini yesithathu yomdlalo IGazi. Inkontilela abamnikeze yona ibinombandela wokuthi ngeke asebenze kwenye indawo ngesikhathi kusaqoshwa.
NgoLwesibili abammeli beFerguson Films bathumele i-Independeny Media incwadi lapho becacise khona ukuthi basacubungula ukuthathela uVatiswa izinyathelo zomthetho.
Ngokombiko we-EWN, uVatiswa wuthe uzolinda abone ngokuthathelwa kwakhe izinyathelo zomthetho.
"Akekho osexhumane nami ngalokhu. Yinto ekuTwitter nje, ngakho ngizolinda ngibone ngibhekane nakho uma sekufikile," kusho uNdara.
Ekhuluma nesiteshi sezindaba iSABC, uNdara uthe abalingisi nabaculi bafa behlupheka ngoba kukhona 'okungahambi kahle'.
"Abantu okumele bakwazi ukuthi asiphili impilo ewubukhazikhazi. Sisebenza amahora amade kanti isikhathi esiningi asiholi imali efanele. Ngo-2019, ngisathenjiswa iholo lango-2005, ngakho kuthina kuba sengathi ukunyuka kwezinga lokuphila nezindleko zokuphila akunakwa lokho," kusho yena.
Uthe, uyinqabile imali engu-R110 000 abeyinikwa yiFerguson Films ngoba esekhathele. Ubefune uR700 000, okwanqatshwa nawo. Uthe, angeke avele kwisizini yesithathu yomdlalo iGazi.
"Ngizicasukele ngoba ngicabanga ukuthi nathi siyakuvumela ngoba sisaba ukungabi naso isinkwa sakusasa. Kudala siziphakamisa lezizinto, kodwa siphinde sizibuze ukuthi ubani esizobalekela kuyena, ngoba kwesinye isikhathi uma siya kuma-agent ethu sitshelwa ukuthi 'yiyeke lento," kusho yena.
Uveze ukuthi wenza uR9000 kuphela ngesizini yonke yomdlalo iHome Affairs, owawudlala kuSABC 1.
"Ngiyethemba ukuthi kukhona okuzokwenziwa ngalokhu. Ngithinte ungqongqoshe ngoba ngethemba ukuthi kukhona angakwenza ngalokhu. Ngimthinte ngoba kunguyena umuntu ongenza izinto zenzeke," kusho uVatiswa.